माइक्रोमीटर: सबै कुरा तपाइँ यो उपकरण को बारे मा जान्न आवश्यक छ नि: शुल्क हार्डवेयर
माइक्रोमीटर: सबै थोक तपाइँ यो उपकरण को बारे मा जान्न आवश्यक छ
यद्यपि यो लम्बाई को एकाइ जस्तै लाग्न सक्छ, मा माइक्रोमीटर हामी यहाँ उल्लेख गरीरहेका छौं यन्त्र यति नाम हो। को रुपमा पनि चिनिन्छ पाल्मर गेज, र कुनै को लागी एक अपरिहार्य उपकरण हुन सक्छ एक निर्माता कार्यशाला वा DIY को बारे मा भावुक ती को लागी, यो महान परिशुद्धता के साथ अन्य उपकरणहरु गर्न सक्दैन के साथ मापन गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
यस लेख मा तपाइँ को बारे मा अलि बढी जान्न को लागी यो के हो, यो के को लागी हो, यो कसरी काम गर्दछ, साथ साथै तपाइँको भविष्य परियोजनाहरु को लागी एक राम्रो छनौट गर्न को लागी कुञ्जीहरु ...
1 माइक्रोमीटर के हो?
1.2 माइक्रोमीटर को भागहरु
1.3 कसरी पाल्मर माइक्रोमीटर वा क्यालिपर काम गर्दछ
2 जहाँ एक माइक्रोमीटर किन्न
माइक्रोमीटर के हो?
El माइक्रोमीटर, वा पाल्मर क्यालिपर, यो एक धेरै सही मापन उपकरण हो। यसको नाम सुझाव दिन्छ, यो महान परिशुद्धता संग एक धेरै सानो आकार को वस्तुहरु मापन गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। सामान्यतया, उनीहरु को लागी न्यूनतम त्रुटि हुन्छ, एक सय मिलिमिटर को सयौं (0,01 मिमी) वा हजारौं (0,001 मिमी) सम्म मापन गर्न सक्षम।
यसको उपस्थिति तपाइँ एक धेरै को याद दिलाउनेछ वर्नियर क्यालिपर वा गेज परम्परागत। वास्तव मा, तरीका यो काम गर्दछ धेरै समान छ। मापन निर्धारण गर्न को लागी प्रयोग गरीनेछ कि एक स्नातक स्तर मा एक पेंच को उपयोग गर्नुहोस्। यी उपकरणहरु मापन गर्न को लागी वस्तु को छेउ छुन्छ, र यसको मापन मा हेर्दै तपाइँ मापन को परिणाम प्राप्त गर्नुहुनेछ। निस्सन्देह, यो एक न्यूनतम र एक अधिकतम छ, सामान्यतया यो सामान्यतया 0-25 मिमी छ, यद्यपि त्यहाँ केहि ठूला छन्।
con औद्योगीकरणविशेष गरी औद्योगिक क्रान्ति को समयमा, चीजहरु मापन मा एक धेरै चासो धेरै सटीक फस्टाउन थाले। त्यतिबेला परम्परागत गेज वा मिटर जस्ता उपकरणहरु पर्याप्त थिएनन्।
अतीत को आविष्कार को एक श्रृंखला, जस्तै को माइक्रोमीटर पेंच को रूप मा विलियम Gascoigne १1640४० को, तिनीहरूले समय को calibers मा प्रयोग vernier वा vernier को लागी एक सुधार को बारे मा ल्याए। खगोल विज्ञान पहिलो क्षेत्रहरु मध्ये एक थियो जहाँ यो लागू हुनेछ, एक दूरबीन संग ठीक दूरी मापन गर्न को लागी।
पछि उपकरण को यस प्रकार को लागी अन्य परिमार्जन र सुधार आउनेछ। फ्रेन्च जस्तै जीन लरेन्ट पाल्मर, जो १1848४1867 मा, ह्यान्डहेल्ड माइक्रोमीटर को पहिलो विकास निर्माण। आविष्कार पेरिस मा १1868 मा प्रदर्शित भएको थियो, जहाँ यो जोसेफ ब्राउन र लुसियस शार्प (BRown र Sharpe को) को ध्यान आकर्षित गर्दछ, जसले १XNUMX मा थोक मा एक उपकरण को रूप मा निर्माण गर्न थाले।
यो घटनाले सुविधा दिएको छ कि कार्यशालाहरु का कर्मचारीहरु उनीहरु पहिले भन्दा धेरै धेरै सटीक उपकरण मा भरोसा गर्न सक्छन्। तर यो १1890 XNUMX ० सम्म हुने थिएन, जब अमेरिकी व्यापारी र आविष्कारक लरोय सुन्दरल्याण्ड स्टाररेट माइक्रोमीटर अपडेट गरियो र यसको एक अधिक वर्तमान रूप पेटेंट। यसको अतिरिक्त, उनले स्टाररेट कम्पनी को स्थापना गरे, जो आज मापन उपकरण को सबैभन्दा ठूलो निर्माताहरु मध्ये एक हो।
माइक्रोमीटर को भागहरु
माथिको छवि मा तपाइँ पाल्मर क्यालिपर वा माइक्रोमीटर को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भागहरु देख्न सक्नुहुन्छ। छन् partes तिनीहरू छन्:
1. शरीर: यो धातु टुक्रा हो कि फ्रेम गठन छ। यो एक सामाग्री बाट बनेको छ कि थर्मल परिवर्तन संग धेरै फरक छैन, त्यो हो, विस्तार र संकुचन संग, यो गलत मापन लिन को लागी कारण हुन सक्छ।
2. टोप: एक छ कि मापन को0निर्धारण गर्नेछ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो एक कडा सामग्री बाट बनेको छ, जस्तै इस्पात, लुगा र आँसु बाट बच्न र मापन बदल्न सक्छ।
3. स्पाइक: यो एक मोबाइल तत्व हो कि माइक्रोमीटर को माप निर्धारण हुनेछ। यो एक हो कि चाल को रूप मा तपाइँ पेंच घुमाउनुहुन्छ जब सम्म यो भाग संग सम्पर्क बनाउँछ। त्यो हो, माथिल्लो र स्पाइक बीचको दूरी मापन हुनेछ। त्यस्तै गरी, यो पनि सामान्यतया शीर्ष को रूप मा एकै सामग्री बाट बनेको छ।
4. लीभर फिक्सिंग: तपाइँ एक मापन फिक्स गर्न को लागी स्पाइक को आन्दोलन लाई रोक्न को लागी अनुमति दिईन्छ कि यो सार्दैन, भले ही तपाइँ मापन गर्न को लागी टुक्रा हटाउनुभयो।
5. र्याचेट: यो एक भाग हो कि बल मा जोडिएको छ जब सम्पर्क मापन प्रदर्शन गरीरहेको छ। यो सजीलै समायोजित गर्न सकिन्छ।
6. मोबाइल ड्रम: यो जहाँ सबै भन्दा सही मापन मापन रेकर्ड गरिएको छ, मिमी को दस मा। एक vernier संग ती मानिसहरु लाई पनी ठूलो परिशुद्धता को लागी एक मिलिमीटर को हजारौं भाग को लागी अर्को दोस्रो मापन हुनेछ।
7. फिक्स्ड ड्रम: जहाँ निश्चित मापन चिन्ह लगाइएको छ। प्रत्येक लाइन एक मिलिमिटर छ, र जहाँ निश्चित ड्रम अंक, मापन हुनेछ मा निर्भर गर्दछ।
कसरी पाल्मर माइक्रोमीटर वा क्यालिपर काम गर्दछ
माइक्रोमीटर एक सरल सिद्धान्त छ। यो एक मा आधारित छ सानो विस्थापन रूपान्तरण गर्न पेंच एक सटीक मापन मा यसको स्केल को लागी धन्यवाद। उपकरण को यस प्रकार को प्रयोगकर्ता मापन सुझाव मापन गर्न को लागी वस्तु को सतहहरु संग सम्पर्क बनाउन सम्म पेंच धागा गर्न सक्षम हुनेछ।
स्नातक ड्रम मा अंक देखेर, मापन निर्धारित गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, यी माइक्रोमीटर को धेरै मा एक समावेश छ भर्नियर, जो एक सानो मापन को समावेश को लागी अंश धन्यवाद संग मापन को एक पठन को अनुमति दिनेछ।
बेशक, परम्परागत क्यालिपर वा क्यालिपर को विपरीत, पाल्मर को मात्र उपाय बाहिरी व्यास वा लम्बाइ। तपाइँ पहिले नै जान्नुहुन्छ कि परम्परागत गेज पनि व्यास मा मापन गर्ने क्षमता छ, र यहाँ सम्म कि गहिराई ... जे होस्, तपाइँ अर्को खण्डमा देख्नुहुनेछ, त्यहाँ केहि प्रकार छन् कि यो समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ धेरै छन् प्रकार माइक्रोमीटर। पढ्ने तरिका मा निर्भर गर्दछ, तिनीहरू हुन सक्छन्:
मेकानिक्स: तिनीहरू पुरा तरिकाले म्यानुअल छन्, र पढाइ एक रेकर्ड मापन को व्याख्या गरेर गरिन्छ।
डिजिटल: उनीहरु इलेक्ट्रोनिक छन्, एक एलसीडी स्क्रिन संग जहाँ पढाइ अधिक सजीलो को लागी देखाइएको छ।
उनीहरु को अनुसार दुई मा विभाजित गर्न सकिन्छ एकाइहरु को प्रकार कार्यरत:
दशमलव प्रणाली: एसआई एकाइहरु, कि, मेट्रिक प्रणाली, मिलिमिटर वा यसको submultiples संग प्रयोग गर्नुहोस्।
स्याक्सन प्रणाली: एक आधार को रूप मा इन्च को उपयोग गर्नुहोस्।
उनीहरुले नाप्ने अनुसार, तपाइँ पनी माइक्रोमीटर जस्तै आउन सक्नुहुन्छ:
Estándar: ती हुन् कि लम्बाई वा टुक्राहरु को व्यास मापन।
गहिरो: उनीहरु एक विशेष प्रकार को हो कि दुई स्टपहरु वा एक आधार हो कि सतह मा आराम संग एक समर्थन छ। जबकि स्पाइक तल छुनुहोस् र यस प्रकार सही गहिराई मापन गर्न को आधार को सीधा बाहिर आउँछ।
भित्री: तिनीहरू पनी दुई सम्पर्क टुक्राहरु संग परिमार्जन गरीन्छ दूरी वा आन्तरिक व्यास सही मापन गर्न को लागी, जस्तै एक ट्यूब को भित्री को रूप मा, आदि।
त्यहाँ अन्य तरिकाहरू पनि छन् उनीहरुको सूची, तर यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन्।
जहाँ एक माइक्रोमीटर किन्न
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने एक गुणस्तरीय र सटीक माइक्रोमीटर किन्नुहोस्, यहाँ केहि सिफारिशहरु छन् कि तपाइँ रुचि हुन सक्छ:
माइक्रोमीटर बाहिर प्रोस्टर एनालग (०.२५ मिमी ०.१ मिमी स्नातक संग).
Beslands डिजिटल माइक्रोमीटर बाहिर (०-२००mm ०.००१mm स्नातक संग) LCD डिस्प्ले संग.
कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।.
Mitutoyo MT128-101 एनालग गहराई माइक्रोमीटर (0-25mm).
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » सामान्य » माइक्रोमीटर: सबै थोक तपाइँ यो उपकरण को बारे मा जान्न आवश्यक छ